Karazan-kaontenera fako: toetra sy fako | Green Renewable
Portillo Alemanina | 13/05/2021 10:00 | fanodinana
Mba hampihenana ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampiasana marina ary fampiasana ny akora dia ampiasaina ny fanodinana. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana akaiky indrindra izay tsy maintsy ampiasain'ny olom-pirenena rehetra hampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainantsika. Ho fanampin'izay, afaka mitantana tsara kokoa ny loharanon-karena voajanahary sy ny akora efa misy isika. Na izany aza, mety ho sarotra indraindray ny manodina araka ny tokony ho izy. Ho an'ity dia misy hafa karazana fitoeram-pako aiza no hametrahana ireo fako rehetra vokarintsika ao an-tranontsika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe inona ireo karazana fitoeran-fako isan-karazany ary inona ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
1 Recycle ao an-trano
2 Karazan-kaontenera fako
2.1 Kaontenera mavo
2.2 Kaontenera manga
2.3 Karazan-kaontenera fako: kaontenera maitso
2.4 Karazana kaontenera fako: kaontenera volondavenona sy volontany
Recycle ao an-trano
Ny famerenana amin'ny laoniny dia dingana iray izay mikendry ny hanova ny fako ho vokatra na fitaovana vaovao hampiasaina manaraka. Amin'ny fampiasana tanteraka an'io fizotran-javatra io dia afaka misoroka ny fako amin'ireo fitaovana mety ilaina isika, afaka mampihena ny fihinanana akora vaovao, ary mazava ho azy ny fanjifana angovo vaovao. Ho fanampin'izany, nampihena ny fandotoana ny rivotra sy ny rano isika (tamin'ny alàlan'ny fandoroana toerana sy ny fanariam-pako isan-tany) ary nampihena ny fandefasana entona entona.
Tena ilaina ny famerenana amin'ny laoniny satria maro ny fitaovana azo haverina toy ny kojakoja elektronika, hazo, lamba ary lamba, metaly ferro sy tsy ferrous, ary ireo fitaovana malaza indrindra toy ny taratasy sy baoritra, vera ary plastika sasany.
Ho an'ireo olona vaovao sy za-draharaha kokoa, saingy mbola manana fanontaniana sasantsasany dia matetika misy fampielezan-kevitra maromaro na programa fanabeazana momba ny tontolo iainana momba ny fako sy ny fanodinana (isan-taona) hampahafantatra sy hampianarana ny olona ny fiantraikan'ny tontolo iainana. Famoronana fako sy fepetra fiarovana ny tontolo iainana hampihenana ny fako.
Ireo fanentanana na programa ireo dia matetika ataon'ny Junta de Andalucía, ny federasionan'ny tanàna sy faritany any Andalusia (FAMP), Ecoembes ary Ecovidrio. Tena zava-dehibe ny hianaran'ny olona manamboatra indray, satria olona maro ankehitriny no tsy mahalala ny fomba hanaovana azy. hamerenana ny zava-drehetra.
Misy karazan-kaontenera fako isan-karazany ary manana ny tena izy izahay izay ampiasaina hametrahana ireo fako isan-karazany arakaraka ny niandohany sy ny firafiny. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Ny tsirairay amintsika dia mampiasa kaontenera mihoatra ny 2500 isan-taona, ny antsasany mahery vita amin'ny plastika. Any Andalusia izao (ary niresaka momba an'i Andalusia aho satria avy eto aho, manana fahalalana bebe kokoa momba ny angona), maherin'ny 50% ny fonosana plastika no voaverina, efa ho 56% ny vy ary 82% ny baoritra no voaverina. Tsy ratsy! Jereo izao ny tsingerin'ny plastika sy ny kisarisary fanoharana kely izay ahitanao ny fampiharana voalohany sy ampiasainao aorian'ny fanodinana azy.
Mba hamitana ity kaontenera ity dia tsy maintsy lazaina fa ny fako tsy tokony ariana dia: fitoeram-taratasy, baoritra na vera, siny plastika, kilalao na fanantonana, CD sy kojakojan-tokantrano.
Soso-kevitra: Alohan'ny hanipazana ilay fitoeran-javatra ao anaty kaontenera, diovy sy apetaho ilay fitoeran-drano mba hampihenana ny habetsany.
Talohan'izay dia efa hitantsika izay voatahiry ao anaty kaontenera, saingy tsy hitantsika izay tsy azo apetraka, amin'ity tranga ity: Diapers maloto, servieta na servieta vita amin'ny taratasy, menaka na baoritra na taratasy matavy, foil aluminium, ary baoritra sy valizy fanafody.
Isaky ny taratasy misy habe mahazatra (DIN A4) napetraka sy alaina, ny angovo voavonjy dia mitovy amin'ny fandrehitra jiro jiro 20 watt roa mandritra ny adiny 1. Noho izany dia zava-dehibe ny fitoeram-bokatra fanodinana taratasy sy baoritra.
Amin'ny alàlan'ny fanodinana taratasy iray taonina, hazo 12 ka hatramin'ny 16 salantsalany no azo avotana, rano 50.000 300 litatra ary menaka mihoatra ny XNUMX kilao no azo avotana.
Karazan-kaontenera fako: kaontenera maitso
Ny iray amin'ireo karazana kaontenera fako be mpampiasa indrindra dia ampiasaina hanodinana vera. Ny vera dia azo averina 100% ary tsy hahavery ny kalitao tany am-boalohany. Isaky ny tavoahangy namboarina dia voatahiry ny angovo ilaina handrehitra ny fahitalavitra mandritra ny 3 ora. Ny fanodinana vera dia maneho 8% eo ho eo (lanja) amin'ny fako totalinay vokarintsika.
Mila 4.000 taona vao simba na manjavona tanteraka ireo tavoahangy fitaratra alevina any anaty fanariam-pako. Mba hanamorana ny fanodinana, Aza adino ny mametraka azy ireo ao anaty fitoerany maitso tsy misy sarony na sarony, ary tokony hapetraka ao anaty fitoeram-pako mavo izy ireo.
Raha mivoaka amin'ireo kaontenera ireo isika ary mampiasa ilay kaontenera volondavenona, dia azontsika atao ihany koa ny mampihena sy mampiasa tsara ny zavamananaina satria na ny zavatra biolojika aza dia azo zezika ary azo ampiasaina ho zezika.
Karazana kaontenera fako: kaontenera volondavenona sy volontany
Ireo kaontenera volondavenona dia antsoina hoe kaontenera nentim-paharazana, ary amin'ny farany ianao dia manary ny fako rehetra izay tsy hainao ny mitahiry. Na izany aza, tsy maintsy manary karazana fako ianao satria fitoeram-bokatra iray ihany. Anisan'ireo kaontenera volondavenona, izy io no fitoeran-javatra tranainy indrindra amin'ireo kaontenera fako fantatra. Io no kaontenera nisy talohan'ny fampiharana ny sisa amin'ireo fitoeran-javatra fanodinana, ary izy ireo dia baikoina miloko arakaraka ny toerana sy karazana fako. Androany, maro ny olona no mieritreritra fa ny fitoeran-davenona fotsy dia mety amin'ny zavatra rehetra izay tsy ao anatin'ny sisa amin'ny kaontenera. Mazava ho azy fa tsy izany no izy.
Fahadisoana tanteraka ny fandatsahana karazana fako rehetra fotsiny ho an'ny tsy fandehany any amin'ireo ambiny. Misy karazana fako tsy ariana amin'ny karazana kaontenera, na dia amin'ny volondavenona aza. Ireo fako ireo dia matetika voatendry teboka madio. Misy ihany koa ireo karazana fako hafa izay misy kaontenera manokana ho azy ireo, toy ny menaka fanary ary bateria. Ho azy ireo dia misy kaontenera manokana. Ny olana amin'ireo fako ireo dia tsy dia matetika loatra ireo kaontenera natokana ho azy ireo ary miparitaka kokoa.
Ny kaontenera volontany dia karazana kaontenera iray izay niseho vaovao ary olona maro no misalasala amin'izany. Efa fantatsika izany ao amin'ny kaontenera mavo misy kaontenera sy plastika, amin'ny taratasy manga sy baoritra, maitso fitaratra ary amin'ny volondavenona ny fako biolojika. Ity kaontenera vaovao ity dia mitondra fisalasalana maro miaraka aminy, fa eto isika dia hamaha azy rehetra.
Ao anaty kaontenera volontany dia hatsipintsika ny fako izay misy akora organika. Midika izany amin'ny ankamaroan'ny sombin-tsakafo vokarintsika. Kirany trondro, hoditry ny voankazo sy legioma, sombin-tsakafo avy amin'ny lovia, atody atody. Ireo fako ireo dia voajanahary, izany hoe mihasimba samirery rehefa mandeha ny fotoana. Ity karazana fako ity dia mety ho lasa ampahany amin'ny hatramin'ny 40% amin'ny zavatra rehetra vokarina ao an-trano.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo karazana fitoeran-fako misy sy ireo toetra mampiavaka azy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Karazan-kaontenera fako